Andro: 5 Oktobra 2019
Kenan Çalışkan, Filohan'ny mpiandraikitra ny fitaterana sy filoha lefitra İbrahim Uslu, Mehmet Yıldırım sy Atilla Demirtunç, TCDD Taşımacılık A.Ş. Ny tale jeneraly Kamuran Yazıcı dia niarahaba ny fitsidihana. Fanomezana ho an'ny Tale Jeneraly Kamuran Yazıcı mandritra ny fitsidihana [More ...]
Fifamoivoizana ao Bursa "6. Eker I Run Run "Fametrahana! .. Misy Lalana Hikatona
Bursa fifamoivoizana "6. Eker I Run Run ". Sampan-draharahan'ny Polisy Bursa hoy ny fanambarana, "Athletics Federasiona Torkia ny tantara sy TAFE 01.03.2019 / 1922 ho voaisa miaraka Bursa lahatsoratra Provincial Tale ny Tanora sy ny Fanatanjahantena azo avy amin'ny" 6. Ekera [More ...]
Diyarbakır Metropolitan Munisipaly, distrikan'i Bismil, ny olom-pirenena amin'ny fampiasana maimaimpoana amin'ny fitateram-bahoaka 2 fanao isan'andro mandritra ny 07.00 sy 17.30 ora amin'ny hopitaly mitohy. Ny kaominina ao amin'ny Diyarbakir Metropolitan, Bismil maimaim-poana ho an'ny olom-pirenena ao amin'ny distrika [More ...]
Ny ben'ny tanànan'ny Ankara Metropolitan Mansur Yavaş dia nanatanteraka ny fampanantenany an'ireo mpianatra mianatra eto an-drenivohitra avy amin'ny volavolan-dalàna mankany amin'ny fitaterana tsirairay. Nanazava ny ben'ny tanàna Yavaş fa hitohy ny fanampiana ara-tsosialy amin'ny fianakaviana tsy misy olana ara-bola [More ...]
Ny Filoha Seçer dia manao famotorana ao amin'ny Seranan'i Taşucu
Mersin Metropolitan ben'ny tanàna Monisipaly Vahap safidy, Metropolitan Monisipaly, Torkia ny hany mampiavaka ny ho nampikambana sy ny kaominina manan-jo hiasa ny seranan-tsambo ho an'ny fanadihadiana iraisam-pirenena ao Taşucu Harbor. Mahazo fampahalalana avy amin'ny olona manam-pahefana ao amin'ny seranan-tsambo izay misy ny fitaterana entana sy ny mpandeha [More ...]
7. Konya Science Festival manokatra ny varavarany ho fanentanana ara-tsiansa
xnumx'inci Siansa Festival in Konya, Torkia ny foibe siansa voalohany nanomboka tamin'ny TUBITAK-nanampy Konya Science Center. KONYA, ANTANIMAN'NY ZAVA-DALANA AO ANATINY SY TODAY Uğur İbrahim Altay, Ben'ny tanànan'i Konya Metropolitan, dia niresaka tamin'ny fanokafana ny fetibe tamin'ny fandraisana anjara mavitrika. [More ...]
'Forum Business Sector and Wagon Sector' 'Nentina tao amin'ny Thrace
Amin'ny alàlan'ny fandrindran'ny masoivoho fampandrosoana Trakya sy Tale Nasionaly momba ny indostrian'ny indostria sy teknolojia, Çorlu ary Çerkezköy Amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Chamber of Commerce and Industry, ny orinasam-pirenena namorona sarety sy lokomotro dia manana fahafahana hanao fivorian'ny biletaora miaraka amin'ireo orinasa ao amin'ny faritra misy antsika. [More ...]
Ben'ny tanàna İmamoğlu: 'Haydarpaşa sy Sirkeci Fiaran-dalamby ao amin'ny olona ao Istanbul'
Ny filohan'ny İBB Ekrem İmamoğlu dia nitsidika ny vondron'ny biby vaksiny sy ny fitsaboana tany Fatih ho ampahan'ny 4 Oktobra World Protection Day. Imamoglu, teo alohan'ny fakantsary, dia namaly fanontaniana avy amin'ny mpanao gazety momba ny fandaharam-potoana. Ivontoerana Imamoglu, Haydarpasa ary Sirkeci [More ...]
Ireo orinasam-pirenena namoaka sarety sy lokomoty dia nivory tao amin'ny forum momba ny asa tao Thrace. Taorian'ireo famelabelarana nataon'ireo solontenan'ity orinasa ity, ny teboka amin'ny sehatry ny sehatra sy ny tanjona ho avy dia nohadihadiana tamin'ny fihaonana roa tonta. Omot Locomotive izay mampiray ny solontenan'ny sehatra [More ...]
Plasticzmir Plastika dia mandray ny dingana voalohany hampihenana ny fako
World niainga nisarika ny saina ho plastika fandotoana ao amin'ny Ranomasina Mediterane Conservation Foundation Nature (WWF) Blue Panda sambo tao Izmir Torkia mifototra ao anatin'ny sehatry ny zava-nitranga. Amin'izany toe-javatra izany, ny fandraisana anjaran'ny "Network-Cities-Free Cities Network arasında eo anelanelan'i İzmir Metropolitan Municipality sy WWF [More ...]
Ny Matematik Matematika ao amin'ny tetikasa Stop Kayseri dia napetraka tany Kayseri
Miaraka amin'ny fiaraha-miasa ao amin'ny Kaogo Metropolitan Kayseri sy Tale Nasionaly momba ny Fanabeazam-pirenena, Tetikasa Matematika any Durak dia notanterahina tao Kayseri. Fiaraha-miasa amin'ny Kaomina Metropolitan sy Dirté d'Idipatration momba ny Fanabeazam-pirenena, tao amin'ny Kayseri ny tetik'asa Matematika any Durak. Mpianatra sy olon-dehibe ao anaty bus [More ...]
Androany amin'ny tantara: 5 Oktobra 1908 nanambara ny fahaleovan-tenany i ...
Androany ao amin'ny Tantara 5 Oktobra Ny Porte de 1869 Porte dia manana fifanarahana manokana amin'i Hirsch, manome antoka ny frantsa 10 tapitrisa fa ny 65 dia nanolo-tena handoavana ny vanim-potoana isan-taona. Nanambara ny fahaleovan-tenany ny 5 October 1908 Bulgaria. 19 Aprily 1909 [More ...]